Misokatra ny sisin-tany Costa Rica ho an'ny mpizahatany avy any Mexico sy Ohio
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Costa Rica » Misokatra ny sisin-tany Costa Rica ho an'ny mpizahatany avy any Mexico sy Ohio
Ny olom-pirenena sy ny mponina ao Mexico, ny tsena fizahan-tany fahatelo lehibe indrindra Costa Rica, avela hiditra amin'ny firenena amin'ny alàlan'ny rivotra manomboka ny 1 Oktobra, raha toa ka manaraka ny fepetra takiana momba ny fifindra-monina be mpahalala izy ireo.
Avela hiditra ihany koa ireo mpizahatany Jamaikana, ary nohamafisina indray ny mponin'i California. Ankoatr'izay, i Ohio dia nampiana ho ao amin'ny lisitry ny fanjakana amerikana mahazo mitsidika ny faritry ny firenena manomboka amin'ny volana manaraka.
Ny vaovao dia nambaran'i Gustavo J. Segura, minisitry ny fizahantany Costa Rica, ny alakamisy teo tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety.
"Ny fanavaozana dia valin'ny fisokafana miandalana sy maharitra eo amin'ny fizahan-tany iraisam-pirenena ary miaraka amin'ny risika voafehy fa nahavita nanetsika ny toekarem-pirenena sy nampivoatra ny sehatry ny fizahantany," hoy ny minisitra.
Mexico dia tsena eo akaiky eo misy fifandraisana tsara, izay miteraka mpitsidika maherin'ny 97,000 isan-taona, ka mahatonga azy io ho tsena fizahan-tany fahatelo lehibe indrindra ho an'i Costa Rica. Raha ny momba an'i Jamaika, tamin'ny taona 2019, mponina 1,180 ao amin'ny firenena no nitsidika an'i Costa Rica.
Hatramin'izao dia fanjakana amerikana 21 no avela hiditra tsikelikely. Ireo fanjakana ireo dia manana areti-mifindra epidemiolojika mitovy amin'ny na ambaratonga ambany kokoa amin'ny areti-mifindra amin'ny any Costa Rica:
Tamin'ny 1 septambra: Connecticut, Distrikan'i Columbia, Maine, Maryland, New Hampshire, New Jersey, New York, Vermont ary Virginia.
• Tamin'ny 15 septambra: Arizona, Colorado, Massachusetts, Michigan, New Mexico, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Washington ary Wyoming.
• Manomboka amin'ny 1 Oktobra: California sy Ohio.
“Miangavy ireo orinasa eo amin'ny sehatry ny fizahantany aho mba hanohy handray ny fomba feno amin'ny alàlan'ny protokol fisorohana. Mangataka amin'ireo mpizahatany nasionaly sy iraisam-pirenena aho mba ho mailo fa izany no izy, ary koa hanaraka ny fepetra fidiovana rehefa mitsidika an'i Costa Rica, "hoy ny minisitra.
Ny fahazoan-dàlana hiditra ny mponin'i California dia zava-dehibe indrindra ho an'i Guanacaste, ary koa ireo faritra akaiky hafa izay handray soa.
Ny Fikambanan'ny mpikarakara ny fizahan-tany italiana dia mifidy filoha vaovao
Four Seasons Hotels and Resorts dia nanambara fananana vaovao telo